IRAKA ARA-PAHASALAMANA FAHA 57 SY 58
Hanatanteraka ny iraka ara-pahasalamana faha-57 sy 58 any Antsohihy sy ny manodidina, toy ny any Befandriana Avaratra, Boriziny ary Antsahabe sy any Maevatanana ny Alatsinainy 19 Martsa ho avy izao ka hatramin’ny Zoma 06 Aprily, ny ekipa ara-medikalin’ny « Médecins de l’Océan Indien » na MOI, izay tarihan’ny Dr Koytcha Firoze, mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana avy any La Réunion.
Nisy ny fahapahafanarana izany hetsika ara-pahasalamana izany tamin’ny mpampahalala vaovao teny Ambohibao, foiben-toeran’ny vondrona SMTP , ny Alarobia 14 Martsa.
Fantatra tamin’izany fa mpitsabo manam-pahaizana amin’ny aretina maro samy hafa avy any ivelany miisa 43, miampy ireo mpitsabo avy eto an-toerana no iaraka hifanome-tanana handray sy hitsabo ireo marary any amin’ireo Faritra ireo mandritra ny tapa-bolana.
Toy ny mahazatra dia hizara andiany roa ireto mpitsabo ireto. Ny andiany voalohany izay ahitana ny mpandidy, ny mpitsabo misahana ny ORL, ny mikasika ny gastro-antérologie, ny mpitsabo fo sy ny maso ary ireo mpanao échographie…. Izy ireo dia handray ireo marary eny amin’ny Hopitalin’Antsohihy. Ny andiany faharoa kosa dia hitsabo ireo marary any amin’ny Hopitalin’I Befandriana Avaratra sy any amin’ny tobim-pitsaboana fototra ao Boriziny sy Antsahabe. Ireo mpitsabo misahana ny fitsaboana ankapobeny sy ny aretin’ny zaza ary ireo mpitsabo nify no mandrafitra ireto andiany faharoa ireto.
Marary eo amin’ny 9.000 ka hatramin’ny 10.000 no horaisin’ny ekipan’ny MOI ao anatin’ireto iraka ara-pahasalamana roa tontosainy ireto. Marihina fa maimaimpoana avokoa ny fandraisana ireo marary, manomboka any amin’ny fizahana, ny fanafody, ny fandidiana na fandidiana ankapobeny izany na ny fandidiana ny areti-maso katarakta, ny fanomezana solomaso, ny fitsaboana na fanesorana nify…. Eo amin’ny manodidina ny 6 euros isan’olona no vola lany amin’ny fitsaboana ireto marary ireto.
Vola mitentina maherin’ny 60.000 euros moa no fantatra fa natokana amin’izao hetsika izao. Fanampiana avy amin’ireo malala-tanana avy any ivelany ny 2/3-n’izany fanampiana izany miampy ny avy eto an-toerana. Anisan’ireo mamatsy vola be indrindra amin’izany ny Conseil Général de La Réunion, ny Coopération Régionale de la Préfecture de la Réunion. Manampy betsaka amin’ny fanohanana izao hetsika izao ihany koa ny vondrona SMTP, izay tantanin’Atoa Danil Ismaël
Fa ankoatra ny fandraisana an-tanana ireo marary dia hanome karazana fampianarana, izay handinihana lohahevitra maro samihafa sy hizarana traikefa sy fahaiza-manao, ho an’ireo mpitsabo any an-toerana sy avy any Mahajanga ihany koa ny ekipan’ny MOI. Hahazo ny anjarany koa ny mpianatra madinika ao amin’ny EPP Antsohihy sy ny manodidina amin’ny alalan’ny fampianarana manokana azy ireo hahay hikarakara sy hikojakoja ny ati-vava sy ny nify.
Marihina fa hiara-dia amin’ny ekipan’ny MOI amin’izao hetsika any Antsohihy sy Maevatanana izao ihany koa ny mpitsabo ny diabeta avy ao amin’ny AMADIA na Andia MAlagasy miady amin’ny DIAbeta. Fantatra fa tato ho ato dia niakatra be ny tahan’ny olona vonan’ny diabeta eto amintsika. Amin’izao fotoana izao dia eo amin’ny 5 - 6%-n’ny Malagasy no diabetika.